‘युवा पलायन रोक्ने प्रयास गर्नेछु’- स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
‘युवा पलायन रोक्ने प्रयास गर्नेछु’
स्थानीय निर्वाचनमा सुर्खेत लेकबेंसी नगरपालिकाको प्रमुखमा एमाले सुर्खेतका सचिवालय सदस्य गगनसिंह सुनार निर्वाचित भए । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको उपप्रधान, गाविस उपाध्यक्ष, जिविस सदस्य हुँदै गणतन्त्रमा नगरको प्रमुख भएका सुनारसँगको कुराकानी :
लामो समयपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । म आफू पनि जनप्रनितिधिको रूपमा निर्वाचित हुने मौका पाएँ ।
सामान्य कामका लागि फाइल बोकेर जिल्ला सदरमुकाम या राजधानी काठमाडौं पुग्नुपथ्र्यो । अब ती कामहरू नगरपालिकाबाट आफैंले गर्दै हुनुहुन्छ ? कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
त्यसका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मलाई नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने मतदाताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा बलिदानी दिने सहिदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छु । संघीय संरचना बमोजिमका स्थानीय तह स्थापना भएका छन् । मैले तिनैमध्येको एक नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दैछु । एकदम खुसी लागेको छ । उत्साह, जोस–जाँगर बढेको छ । हामी सामान्य जनप्रतिनिधि मात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत हौं । अत्यन्त संवेदनशील, जिम्मेवारीबोधका साथ संविधान, ऐन, कानुनले दिएको अधिकारको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय शासन सञ्चालनको नेतृत्व गर्न सक्षम हुने विश्वास लिएको छु ।
मेयर निर्वाचित हुनु भो अब तपाईंका प्राथमिकताहरू के हुन् ?
हामी पहिलोपटक संघीयताको प्रयोग गर्दैछौं । काम गर्दै, सिक्दै जाने हो । स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका आइपुगेको छैन । संविधान, ऐन/कानुन पल्टाएर हेर्न बाँकी नै छ । संविधानमा उल्लेखित हाम्रा अधिकार, कर्तव्य के–के हुन् ? कसरी सम्पादन गर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, हामी नगरका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षहरू स्थानीय सरकारका प्रमुख हौं । स्थानीय सरकार नै सबभन्दा बढी जनतासँग नजिक हुने हुँदा काम गर्दा थुपै्र कठिनाइ आउन सक्छन् । नगरभित्र विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गराउन अहोरात्र खटिनेछु । संविधान, ऐन/कानुनले दिएको अधिकारको सही प्रयोग गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वय गर्नेछु ।
लेकबेंसी नगरपालिकाको समस्या के हुन्, ती सबै थाहा छ । अब ती समस्या समाधान गरेर समृद्ध नगर बनाउने बेला आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका संरचनाहरू अव्यवस्थित छन् । सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन नसक्दा अभिभावकहरू महँगो शुल्क तिरेर सहरबजारका निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य छन । पहिलो काम सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु हुनेछ । दोस्रो, युवा पलायन रोक्नलाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु । लेकबेंसी कृषि, पशुपालनको राम्रो सम्भावना बोकेको नगर हो । बजारको पहुँच छ । यद्यपि उत्पादन छैन । अब युवालाई विदेश जानबाट रोकेर गाउँमै उद्यम गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ । यो नगरपालिकामा अवसर जति छन् त्यति नै चुनौती पनि छन् । झुप्राखोला, भेरीजस्ता नदीलाई सिंचाइर विद्युत उत्पादनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारको उच्च कार्यकारी पदमा पुगेको तपाईं दलित समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईंको नगरमा पनि वर्षौंदेखि दलित समुदायले अभाव, उत्पीडिन र विभेद झेल्दै आएका छन् ? उनीहरूको उत्थानका लागि तपाईंको योजना के हो ?
पक्कै पनि दलितहरू अन्य समुदायभन्दा बढी उत्पीडनमा छन् । अभाव, विभेद झेलिरहेका छन् । त्यसका लागि पहिलो कुरा उनीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन आवश्यक देखेको छु । दोस्रो, आयआर्जनमा जोड्न जरुरी छ । शैक्षिक स्तरवृद्धि र आर्थिक रूपले दलित परिवार सम्पन्न भयो भने कसैले विभेद गर्ने आँट गर्दैन । दलित स्वयं अपमानित हुनुपर्दैन । विभेद उन्मूलन गर्न दलित–गैरदलित दुवै वर्गको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । दुवैको समान दृष्टिकोण बन्नुपर्छ । लेकबेंसी नगरलाई छुवाछुतमुक्त नगर बनाउने घोषणापत्र जनतामाझ लिएर गएको हुँ । ती घोषणापत्रमा लेखेका कुरा क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जानेछु । दलितहरूको शिक्षा, जीविकोपार्जन सुधार गरी सामाजिक/राजनीतिक संरचनामा पहुँच पुर्‍याउन योजनाबद्ध रूपले लाग्नेछु ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७४ ०८:१५
बन्दुक र स्टेरिङपछि स्थानीय सत्ता
जेष्ठ ७, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
रुकुम — बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने स्कुलिङका कारण मुसीकोट नगरपालिका ८, उदिनढुंगाका बुद्धिप्रसाद बुढा तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धमा होमिए । २०५५ देखि २०६२ सम्म भएका अधिकांश लडाइँमा उनको सहभागिता केहीमा बाहेक छुटेको छैन ।
जुम्लाको सदरमुकाम कब्जाका क्रममा छातीमा १ र बायाँ हातमा ४ गोली लागेर पनि उनले लड्न छाडेनन् । २/२ पटक माओवादीले आक्रमण गरेको रुकुमको खारा ब्यारेकमा लडाइँमा उनी सहभागी भए ।
‘खाराको पछिल्लो आक्रमणपश्चात् पार्टी बन्दुक मात्रै नभएर छलफल, वार्ता संवादले पनि समस्याका समाधान निस्कन्छ भन्नेतिर लाग्यो र हामी पनि सहमत भयौं,’ उनले भने । बटालियन कमान्डर रहेका उनी अन्य लडाकुसँगै क्यान्टोनमेन्टमा बसे । समायोजनपछि उनी स्वैच्छिक अवकासमा निस्किए ।
स्वैच्छिक अवकाशपछि बेकामे जस्तै बनेका बुढाले काम खोजे, पढाइबिना कुनै काम नपाएपछि गाडी चलाउन थाले । बटालियन कमान्डर स्टेरिङमा जीवन घुमाउन थाले ।
‘क्यान्टोनमेन्टमा सिकेको सीप स्वैच्छिक अवकाशमा आएपछि काम लाग्यो,’ उनले भने ।
ऋणधन गरेर किनेको ग१ज २२८० नम्बरको गाडी ४ वर्ष चलाएका बुढाको हातमा अब सिंगै वडा ड्राइभ गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । ३५ वर्षीय बुढालाई मुसिकोट नगरपालिका ८, का मतदाताले वडाध्यक्षमा जिताएका छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका बुढाले प्रतिस्पर्धी एमालेका राजकुमार केसीलाई ९३ मतान्तरले पराजित गरे । बुढाको पक्षमा २ सय ३० मत आएको छ भने केसीले १ सय ३७ मत मात्रै ल्याएका छन् ।
‘अब गाडी होइन वडा चलाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘महिना दिनदेखि स्टेरिङ छोएको छैन, अब सम्भव पनि हुँदैन होला ।’ अब जनसरोकारका विषय र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘बन्दुकबाट सत्ता कब्जा भएन, अब त हातमै आएको छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ’, बुढाले भने । नगरपालिकाका १४ मध्ये आफ्नो वडा सबैभन्दा विकटमा रहेकाले काम गर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । ‘अन्य विकास निर्माण त भएको छैन नै,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म वडाका सबै ठाउँमा फोन नै लाग्दैन, मेरो पहिलो चुनौती सबै ठाउँलाई सञ्चारको पहुँचमा ल्याउनु हो ।’